Usakhululekile ngomsebenzi wakhe kuChippa uSeema othi abaphathi bayameseka yize izinto zingahambi kahle - Impempe
Usakhululekile ngomsebenzi wakhe kuChippa uSeema othi abaphathi bayameseka yize izinto zingahambi kahle
December 16, 2020 lindile
Ukunqoba owodwa, ukwehlulwa kwemithathu nokudlala ngokulingana kwemibili emdlalweni eyisithupha yinto usihlalo weChippa United, uSiviwe “Chippa” Mpengesi, osedume kabi ngokungalilindi ibhadi uma kuziwa ekuxosheni umqeqeshi, okufanele ukube isimlalisa obenyoni ecabanga ngokwenza adume ngaso kuLehlohonolo Seema.
Kodwa lommqeqeshi odabuka eLesotho akakakhathazeki okwamanje, uthi abaphathi basameseka ngokugcwele njengoba umbono wabo ngeqembu umkhulu ukwedlula isimo ababhekene naso njengamanje sokudonsa kanzima emjahweni weDStv Premiership.
“Angifikanga lapha ngazivalela ekhoneni lami ngedwa ngazenzela izinto zami,” kusho uSeema ngoMsombuluko. “Ngahlala phansi nabaphathi ngabachazela ngombono wami, nabo bawuthanda futhi baweseka. Basameseka namanje. Nginethemba elikhulu lokuthi bayabona lapho iqembu libheke khona, futhi uma ulibuka lidlala uyabona ukuthi ukhona umehluko.
“Kudingeke siqale sibheke indlela esizodlala ngayo. Abadlali bakhombise ukuba nesasasa futhi sebethembisile ukusebenza kanzima ukuze sigoqe ungaka ngegiya eliphezulu,” kuchaza lo mqeqeshi oneminyaka engu-40.
Nokho uma imiphumela iphinde yangacaca uma sebebhekene ne-Orlando Pirates ngoLwesithathu, kungenzeka uSeema abone lokhu kwesekwa aqhoshe ngakho kushabalala kuhle kwamazolo ebona ilanga njengoba uMpengesi ekuxwaya ukuhlulwa kweqembu lakhe yiziNkunzi zaseSoweto. IChilli Boys seyivele seyike yahlulwa yiKaizer Chiefs kule sizini. IPirates yona izobe igcwele ukuzethemba kulandela ukunqoba kwayo indebe yeMTN8 ngempelasonto edlule. USeema uwuchithile umbono wokuthi iBhakhaniya lizobe lisabanjwe yibhabhalazi lokujabulela indebe yalo yokuqala ngemuva kweminyakanyaka.
“Kungabe sizilimaza thina uma singacabanga ukuthi bazobe besajabulele leya ndebe. Ngiyacabanga sebedlulile kulokho manje yize bekuyindebe yabo yokuqala ngemuva kweminyaka eminingi. Siyabazi ukuthi banezibabuli zabadlali futhi kuyimanje asazi ukuthi bazobe bebophele kanjani ngoLwesithathu ngenxa yokuthi baphethe ukhilimu wodwa wabadlali.
“Kunzima impela ukuhlela ukuthi ungabadida kanjani. Kumele siqinisekise ukuthi asisinisi amahleza futhi silimdele impi. Sibazi kahle ubungozi babo,” kuchaza uSeema.
Previous Previous post: Uzehlisile, waxolisa uKhune ongcwabe iChiefs iphila eyidlisela koweligi
Next Next post: Ngabe ikhohlisana ihlomelene? uNcikazi we-Arrows uncoma AmaZulu